Yinqoba Intliziyo Yowesifazane Wama-Aries
Unqulo & Umoya Uthando
Yinqoba Intliziyo Yowesifazane Okhulayo
Abafazi be-Aries baye bafaka umlilo, oku kuthetha ukuba bafanisana neenjongo kunye naluphi na umntu wesilisa. Nangona kunjalo, unqwenela ngokufihlakeleyo umntu oza kukhupha umxhasi wakhe, kwaye enze ukuba azive njengomfazi.
Inkosikazi uRam iyazisa ukuzithemba kunye nomoya wokukhuphisana. Utsalwe kumaqabane asemzimbeni njengoko akhona. Ufuna umfana owenza ngokuthe tye, kwaye akukho nto inokuthetha.
U-Aries ngumqondiso oshukumisayo kuba benza into yabo.
Umfazi we- Aries uyithatha umngcipheko kwaye uyakuthanda ukuxhatshazwa ngokwesondo. Kuyafaneleka ukuba utshatshele, kwaye uhlasele umhlaba usebenza ngothando. Imihla yokuqala ihamba ixesha elide ubusuku, kunye nokubandakanyeka kwayo kwangoko. Uyakhuthazwa xa echukumisa imida yakhe. Imihla emikhulu yimisebenzi yokuzama into entsha - ukusuka kwindawo yokuhamba ngesikebhe ukuya ehamba ngomkhumbi okanye kwi-tango.
Uluphawu lwekhadikhadi , oko kuthetha ukuba ungumqali. Uyakwazi ukukhokela ngokuhamba.
Ufika kude xa ubonisa oko uthanda ngako. Uyamkela abo bazenzayo. Ngoko umntu ozenzayo (okanye ibhinqa) uyathandeka kakhulu. Yenza umdla wakhe ngeengoma ezivela kwiimeko zakho ezilungileyo, xa ubeka umngcipheko okanye walwa kwaye wawina.
Ama-Aries othandweni unomdla, unomdla kwaye ushesha ukutshaya. Amanani ngowona mqondiso wokuqala, ke qiniseka ukuba kukho ezininzi zokuqala kwimpilo yakho yothando. Isihlandlo sokuqala ukuzama ukutya kweTibetan.
Isihlandlo sokuqala endleleni yokuhamba.
IPredator kunye nePrey
Masithembeke - umfazi we-Aries unokunyamezela ngokunyaniseka. 'Uyifumene' ukuba uyayenza 'isicwangciso asiyi kusebenza ngenxa yokuba imvelo yakhe iyakhupha, kwaye ude udlale ekubuthathaka. Kwabanye, uvakalelwa ukukloloda, kodwa kwabanye, kwanele ukuhamba.
Ukuba uweleka kumfazi wase-Aries, lungele ufumane umngeni. Uhlobo lwakhe, kwaye ukuba awukwazi ukuthatha ubushushu, kulungile ukuba ushiye ikhitshi ekuqaleni. Ukuba unyuke kulo, inzala yothando kunye nomfazi we-Aries uza kuba neentlalo, "ukulwa," uthando oluvuthayo, ukuzonwabisa, kunye nevakalelo yokuba ihlala yintsha.
I-Aries yecala elimnyama ngumnqweno wokuvusa, kwaye uxhaphazele ukuxhatshazwa rhoqo. Oku kunzima kwimiphefumlo enengqondo, njengempawu zamanzi kunye nalabo abanememori ende.
Akusiyo ingcamango efanelekileyo yokubambisana nomfazi we-Aries ngokutyhilela ubunzima bakho. Abanye abafazi bathanda 'kumama', kodwa oko akuyi kusebenza apha. Umfazi wase-Aries ufuna iqhawe kunye nabaninzi njengamadoda endoda.
Abaninzi (i-Sun) Abasetyhini abafazi bathanda ukwenza izinto ezicatshangelwa ngabantu, njengemibhiyozo yezemidlalo. Udla ngokuba ngumntu onokuhlala kunye nabafana.
Kodwa njengazo zonke izibonakaliso, unokwenene, kwaye kuninzi iintlobo zengcali ze-Aries njengokuba zikhona ezo zikarhulumente zobukreti okanye ibhola yokukhangela. Nantoni na engena kuyo, ufuna ukuba yinto engcono kakhulu kuyo. Ilungelo liya kumnceda ngendlela yakhe, kwaye umkhuthaze ukuba akhanyise kakhulu.
Uyadonsa, kodwa i-Aries ego yenza kube nzima kuye ukuba angathathi izinto.
Ukuba ubonisa iimpawu zokulahleka, mhlawumbi uya kuqalisa isiteyathelo sokurhoxiswa kwangaphambili. Kodwa ke, ukuba unomdla, unokuba udlala isicwangciso sokukhumbuza into onayo.
Ukulungele ukwenza uhambo olunzulu, ukugcina ubudlelwane bube sisigxina. Aries abafana kunye ne-gals banesidima sokuhlala bephefumlelwe, kwaye ukuhlala nabo kukunceda ukucima umlilo wakho (kwitshathi).
Ibhinqa le-Aries likhawuleza ukuthukuthela kodwa likhawuleza ukuliyeka, kwakhona. Unomusa kunye nalabo abathandayo kwaye bahlala bephefumlelwe. Ukuba uyayikhathaza, iya kubonisa, kwaye yinto enqabileyo ekupheleni kwayo.
Ubume bomlilo obuyi-Aries buya kuba yinto ephilileyo kunye nokuzimelela. Ufuna ukwazi ukuba unokuma ezinyaweni zakhe ezimbini. Uyasabela ekukhuthazeni kodwa ayikho enkulu kwizinto ezithandekayo, ezinomdla.
Ukhawuleza kwaye unomdla kwaye uya kuphila xa nawe unjalo.
Uya kuba nombulelo, ukuba ubeka imeko ye-catharsis, ngesondo ibe yenye yazo. Kukho kwakhona ukuvavanya kwiimeko ezahlukeneyo, okanye ukuhlola indawo ezintsha. I-Aries ixinezelekile xa iphikisana nemingeni, kwaye iyanamathela kwi-rut.
Ukuba unomntu ophethe amaphupha akho amakhulu, kunye nokuthanda ukwenza ukuba kwenzeke, oko kuya kukhangela umdla wakhe. Ukuba uyakrokrela ufuna ukulawula, uphepha okanye nayiphina indlela ubeka umlilo wakhe, uya kufuna. Umdlalo omhle ngumntu othembekileyo ngobunzima bakhe kwaye akaxhaswanga ngumfazi ozimeleyo (egxile ngaphakathi kuye).
Virgo Othandweni - Ukuhambelana kweZodiac
I-Taurus ne-Sagittarius Uthando oluhambelana nokuhamba kunye nokuzonwabisa
Venus eGemini - Iimpawu Zothando
Ukuphumelela Intliziyo Yomfazi Weengcambu
IVenus kwiTaurus Woman
I-Sagittarius in Love: Ukudibanisa kwe-Zodiac
Uthando lukaLobert kunye neLibra
U-Leo kunye ne-Scorpio Uthando olufanelekileyo
Indlela Yokuphumelela Intliziyo Yomntu waseTaurus
I-Gemini kunye neKhansela yoLuthando lweNtsholongwane
Gemini NgeGemini: Uthando lwabo luhambelana
Fumana i-Pisces Man Wanting
Isiseko se-Photosynthesis - Isikhokelo soFundo
Yakha Ikhefu Yakho Yokuhamba Ekulungele Ukuhamba
Yintoni Emanzi Amandla?
Adapt kwaye idibanise
Kutheni ukuchithwa kwezinto kwaye kuluphi uhlobo lobunzulu bomhlaba?
Ukuba ungabonakali ukulawula i-migratorio alle i la aduana americana
Iindlela ezili-10 zeeNtsana Zizivikela
Top Shortstops KwiMbali yeBhola
I-Transylvania University Admissions
Imvelaphi yeSithili saseSaskatchewan saseKhanada
Uncedo ngeToyota Camry Transmission Problems
Bhala kwiNkulumbuso yase-Ontario